रामदेवसामु पोखिएको नेपाली शासकको लघुताभास - Online Majdoor
भारतका जडीबुटी व्यापारी रामदेवप्रति नेपालका शासक दलका नेताहरूको अनुराग लघुताभासको अभिव्यक्ति हो । रामदेवलाई हिजोआज नेपाली युवाहरू भारतको हास्यप्रधान कार्यक्रम ‘कपील शर्मा शो’ मा हेर्छन् । उक्त टेलिभिजन कार्यक्रममा मनोरञ्जन क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर हाँसो ठट्टा गरिन्छ । भारतमा रामदेवको खास हैसियत त्यत्ति हो । न उनी कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्ति हुन्, न भारतमै प्रतिष्ठित व्यक्ति हुन् । निर्वाचनको समयमा हिन्दूवादी खेमाको वकालत गर्नुभन्दा बढी राजनीतिमा पनि उनको ठूलो भूमिका छैन । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वा कुनै सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलका कोही नेताले रामदेवलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गरेको कुनै उदाहरण छैन । बरु भारतमा रामदेवलाई लिएर सस्तो हाँसोठट्टा हुने गर्छ ।
त्यस्ता सामान्य व्यापारी नेपालको भ्रमणमा आउँदा सीधै हाम्रा शासकहरूका बेडरुम पुग्छन् । सत्तारुढ गठबन्धनका सबै नेताहरू एउटै दबुमा उभिएर रामदेवको कदरमा शब्दकोश रित्याउँछन् । आफूलाई ‘क्रान्तिकारी’ दाबी गर्ने माओवादी नेता प्रचण्डसमेत रामदेवलाई क्रान्तिकारी भन्दै छन् । भारतको एक जना साधारण जडीबुटी व्यापारी र योगलाई प्रयोग गरेर आफ्नो व्यापार प्रवद्र्धन गरिरहेका रामदेवमा प्रचण्डले के त्यस्तो क्रान्तिकारी चरित्र देखे जो भारतका कम्युनिस्टहरूले देखेनन् । रामदेव प्रचण्डले भनेजस्तै क्रान्तिकारी भए किन भारतका वामपन्थी र क्रान्तिकारीहरूले उनलाई आफ्ना नेता र मार्गदर्शक मानेका छैनन् ?
नेपालबाट सस्तोमा जडीबुटी भारतमा लान अथवा आफ्नो व्यापारको निम्ति कच्चा पदार्थ खोज्न आएका व्यापारीको पाउमा नेपालका शासक दलहरू किन घिडघिडाइरहेका छन् ? योग शारीरिक व्यायामको शैली हो । तर, योगलाई धर्म र गेरुवस्त्रसँग जोडेर धर्मभिरु जनतालाई मूर्ख बनाएर आफ्नो व्यापार बढाइरहेको भारतीय व्यापारीसामु नेपालका शासकहरूको तन्मयता के उद्देकलाग्दो छैन र ?
शासकहरूका यस्ता व्यवहारले सिङ्गो नेपाल र नेपाली जनताको शिर झुकेको छ । नेपाली स्वाभिमानको उचाइ घटेको छ । भारतबाट आएपछि जसलाई पनि महत्वपूर्ण र महान् ठान्ने लघुताभासी व्यवहारको कारण आज सार्वभौम देशहरू भएर पनि नेपाल र भारतबीच समान हैसियतमा कूटनीतिक र छिमेक सम्बन्ध बन्न सकेको छैन । रामदेवप्रति शासकहरूको व्यवहार खासमा भारतीय एकाधिकार पुँजीप्रतिको आत्मसमर्पण हो । वास्तवमा शासक दलका नेताहरूले नेपाललाई स्वाभिमानी र स्वाधीन बनाउन चाहेका भए उनीहरूले नेपालसँग भएको जडिबुटी र अन्य स्रोत रामदेवजस्ता व्यापारीको पाउमा बुझाउने होइन, नेपालमै जडिबुटी कारखाना स्थापना गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ । नेपालमा जडिबुटी कारखाना स्थापना गर्न रामदेवको सहारा आवश्यक छैन ।
तत्कालीन माओवादी विद्रोही र सरकारले भारतको राजनीतिक नेतृत्वसम्म हैसियत विस्तार गर्न नसक्दा तल्लो तहका कर्मचारी र गुप्तचरमार्फत व्यवहार गर्दा देशले भोग्नुपरेको क्षति विश्लेषकहरूले भुलेका छैनन् । आज फेरि पनि शासक दलहरू रामदेवजस्ता धर्मको नाममा नाफा कमाइरहेका व्यापारीलाई देखाएर आफूलाई भारतको समर्थन रहेको भ्रम छर्न खोजिरहेका छन् । सत्ता टिकाउन भारतको आशीर्वाद चाहिने पराधीन चिन्तनका रोगी नेताहरू रामदेवको पूजा गरेर मोदीको आशीर्वाद खोजिरहेका छन् ।
नेताहरूले के बोल्छ महत्वपूर्ण कुरा होइन, के गर्छ महत्वपूर्ण हो । समयले को नेता के हो भन्ने कुराको मुखुण्डो उठाउने काम गरिरहेको छ । प्रचण्डको बेडरुममा रामदेवको तस्बिरले ट्रोजन हर्सको नेपाली संस्करणलाई अझ प्रकाशमा ल्याएको छ । नेपाली स्वाभिमान रामदेवसामु यसरी चिरहरण गरेर नेपाली शासकहरूले आफ्नो होचो उचाइ नेपाली जनतासामु उजागर गरेको छ ।